I-Akhawunti Eyinhloko Yobunikazi Be-Forex, Ama-Akhawunti Ezohwebo Zokuhweba Amabhizinisi nge-FXCC
I-Akhawunti ye-Forex Trading Trading
Ikhaya / Ukuhweba / Ama-Akhawunti / I-Akhawunti yebhizinisi
Izicelo ze-akhawunti ye-akhawunti ye-Forex Trading kufanele ithunyelwe lapho iNhlangano yezomthetho noma ebhalisiwe ihlose ukuvula i-akhawunti.
Ifomu lesicelo se-Akhawunti ye-Akhawunti uzothola izindawo ezilungiselelwe ukunikeza abaMemezeli abagunyaziwe, ukudayisa, ukufaka noma ukuhoxisa egameni lomfakisicelo.
Ukuvula i-Akhawunti Yokuhwebelana Yenkampani nge-FXCC inqubo eqondile:
Ngiyacela ukulanda nokuqedela imibhalo elandelayo:
I-akhawunti yokuvula i-Akhawunti I-Client Signature Specimen Amandla akhethekile e-Corporate of Attorney Ukuqondiswa kweBhodi labaPhathi
Gcwalisa bese ubuya lezi kanye nolwazi olwesekwayo oluceliwe ku-FXCC, noma nge-Fax noma i-imeyili.
Ifeksi: +44 203 150 1475
Uma isicelo sakho se-akhawunti sitholiwe futhi senziwe, imininingwane yakho yokungena izothunyelwa kuwe ngomnyango we-akhawunti ye-FXCC.
Sicela uqinisekise ukuthi ufunde futhi uqonda amaphepha alandelayo:
Isivumelwano seKhasimende sikaCFD